Tilmaamayaasha ganacsiga ee CycleTrader -Day Ganacsiga ganacsiga ES500 | NQ100 - NinjaTrader 8 Markaad leedahay ganacsi faa'iido leh adiga oo adeegsanaya CycleTrader, waa adag tahay inaadan lacag sameyn.
Nidaamka Qalabka CT-ga
Diiwaan / Demo
CycleTrader Tusmooyinka Ganacsi Ganacsi Ganacsi ah
CycleTrader Custom Auto Trading Systems - Xeeladaha
Waxaan ku soconaa NinjaTrader 7 & 8
Download Download CycleTRADER Demo
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - Juun 25th
Shaqada weyn Jerome !!! Tilmaamahan cusub ee CT09 Bare Delta ee cusub wuxuu na siinayaa gees khatar ah oo soo galaya kana baxa suuqa. Isticmaal jaantusyada muddada dheer si aad u qorsheyso ganacsi sahlan. Waxay leedahay natiijooyin faa'iido leh haddii aad ku kalsoon tahay xisaabta !!! Cusbitaalkani wuxuu na siinayaa gees weyn. Markii aan shalay la hadleynay, waxaan sheegay in $ 7,400 usbuucii hore la soo bandhigay tilmaamihii hore ee CT iyo $ 312 habeenkii la soo dhaafay ganacsiga cusub kadib markii aan wada duubnay, iyo $ 2,500 maanta. Jacaylka CT09 ... Halkan waa caddayn. MAHADSANID!!
Jim R. Realtor / Maalgashi Maalin, CA
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - Juun 26th
Anigu waxaan gubay dhowr jeer ka hor iyo markii aan la xiriiray Jerome wixii ku saabsan tusmooyinka, waxaan weydiiyay sababta ay kuwan u fiican. Jawaabtiisu waxay isku dayday demo oo marka hore arag. Taas ayaan sameeyay, maantana waan soo iibsaday. Waan awoodey inaan arko qiimaha badeecada si aan u soo galo si ka wanaagsan sidii hore. Tilmaamaha CT 09 ayaa sidoo kale i siiyay bixitaankii ugu fiicnaa. Waad ku mahadsantahay Jerome inaad abuurto kuwan. Waxay bedeshaa habka aan ganacsiga u ahay iyo hadda waxaan lacag sameynayaa. Ilaa $ 1450 maanta on 1 ilaa 4 badan ee ES 500.
Ron J. Maalgashadayaal Maalin, Tucson, AZ
Tilmaamayaasha ganacsiga ee CycleTrader NT8
Wareegyada Wareegga Wareegga "CycleTrader Smooths" NT8
CycleTrader Qalabka Awoodda Awooda Cus8
Nidaamka CycleTrader Systems P / L Manager NT8
Tilmaamaha CycleTrader / Nidaamka NT7
Waxbarashada alaabta loo yaqaan "CycleTrader"
Demo / Qiimeeyn
14 Maalinta Dambe
Saameynta San Francisco
Weligaa Dib Loogama Tagin
© Copyright 1988-2019 Bressert Trading Technology, LLC. - Jimco, July 19, 2019
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha
Wow, Koorsooyinka Great !!! Hadda waan arkayaa, waxaad tihiin xaq! Waxaad ku heli kartaa qiimo aad u fiican oo aad kalsooni ku qabtid ganacsiga kasta. Waad ku mahadsantahay inaad taas ii muujiso ... ilaa $ 875 maalinta ugu horeysa ee aan ku ciyaarayo hababkaas. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay Qaybta GOLD! MAHADSANID!
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - Juun 18th, 2019
Hiow - Waan jeclaaday nidaamka ganacsigaaga. Waxaan ka dhigay $ 1,000 dollar ka hor maalinta koowaad la xisaabtanka simulator ee ganacsiga Ninja. Sidaas ayaan maanta iibsaday.
... Aniga waxaan xaqiiqsanahay tusmooyinka
Dan Br - Maalgashadayaal Maalin
Hello Jerome, waa inaan kuu sheegaa in ganacsiga adigoo adeegsanaya muujiyaha mugga isku mid ah waa cajiib ...
John L / Day Ganacsiga
Faallada Macmiilaha - Nidaamka - June 11th, 2019
Waxaan dhammeystiray mid ka mid ah Tallaabada Ugu Saraysa 50K ee isku xira maalmaha 11. 🙂 Isticmaal xeeladda 1003!
Gene - Nidaamka Nidaamka
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - May 31st, 2019
Jerome- Maalin wanaagsan oo maanta ah ayaan la lahaa calaamadaha; nadiifiyay $ 1900 on e-minis. Xaqiiqdii waxay ahayd sidii aan u heli lahaa muraayadeyda oo aan ku dhajiyo, awood u leh inay si toos ah u aragto suuqyada si aan fududeyn meelo kale. - Dib ayaan u wareegayaa oo dhameystiri doonaa iibkayaga dhammaadka usbuuca - waxaan rajeynayaa inaad naftaada mid fiican leedahay.
... Waxaan rabi lahaa, oo, marnaba ganacsi la'aanteed aan lahayn CycleTraderPro, weligiis!
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - Juun 21st
Waqtiga rasmiga ah ee 1 iyo xinjirrada 40 waxaan ahay $ 1,000 ganacsiga shaxda 1 oo keliya oo kaliya badiyaa ganacsiga 1 iyo 2 marka loo baahdo. Kaliya ganacsiga waxa aad i tusay ... waa dhab ahaantii ugu yaraan welwelka aan waligey qaadanayay.
Ma hubo haddii qof kale oo dibadda ah uu muujiyo mugga sida tilmaame sida aad u sameyso. Laakiin taasi waa tikidh dahab ah oo lagu arko isbeddellada! Shaqo fiican!
Haatan waxaan sugayaa inaan ganacsiyada qaado ilaa aan arko VMIa Volume oo ku socda jihada isku midka ah qiimaha tusmada iyo BOOM! WOW!
Bader, CA - Trader Maalinta NQ
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - Juun 20th, 2019
Waxaan jeclaa VMI iyo khadka cagaaran ee lambarada baraha. Shaqada weyn Jerome. Thanks
Waxaan ogaaday markii aan helay nidaamka CycleTRADER Systems. natiijooyinka cajiibka ah. Euro wuxuu dhigay $ 6335, ka dibna $ 3800 kale ... Mahadsanid aad u badan Jerome, waxaad samaysay shaqo taariikhi ah oo lagu hormarinaayo nidaamyadeenna.
Bart D - Nidaamka Ganacsiga Jarmalka
Waan jeclahay tilmaamayaasha ka dib qiimeyn dheeraad ah - Waan soo iibsaday! Waa sida dhabta ah ee aan u jeclahay in aan ganacsiga. Waxay u egtahay caawimo dhab ah oo qiimo leh oo lagu isticmaalo xilliga ganacsiga-dhabta ah. Waxaad runtii heysataa wax weyn oo ujeeddooyinkayga ah. Anigu si cad ayaan ula socdaa meesha aad ka dhigan tahay inaad ka faa'iidaysato suuqyada.
Adam C - Trader Day
Jerome - CT 34 Taageerada / Resistance Windows iyo CT 09 Qadarka Maqalka Delta waa mid aan run ahayn.
Waa wax waalan in aan ka soo horjeedo oo aan caadi ahaan lahaa marka ay timaado baararka delta, ie iibiso casaan. Hadda waxaan tagayaa daaqad oo eega inaan iibsado casaan iyo iibin marka cagaaran sababtoo ah waa sida ay u shaqeyso waxaanan hadda ka arki karaa Tilmaamaha Cycle Trader Indicators.
Cid kasta, beddel kale oo bedel ah aniga. Dilitaanka labadii maalmood ee la soo dhaafay iyada oo keliya shaxdan 15 min minta
Robert - Maalinta Maalinta
Faallooyinka Macaamiisha - Muujiyeyaasha - Juun 19th, 2019
Jerome, - Ereyada ma sheegi karaan shaqeynta Ganacsiga loo yaqaan "Cycle Trader". Waxaad si fudud u iibsataa ganacsatada hubka badan oo si buuxda loo gaari karo si loo jimicsado maalinta suuqyada maalin iyo maalinba ... si buuxda u fahansan. Iyadoo dhowr jeer oo cusbooneysiin ah iyo casriyeyn ah kuwaas oo kor u qaadaya barnaamijkii horey loo isticmaalay iyo midka ku habboon waxaad marnaba ka joogsan doontaa in aan layaabiyo. Waxaad tahay naqshad run ah, ganacsade ganacsade ah.
Had iyo jeer la qabsashada suuqyada isdaba jooga ah, hana ku hayn habka muhiimka ah. Dib u cusboonaysiinta dhow ee mugga cusub ee delta iyo taageerada TRUE / daaqadaha daaqadaha / aagagga waa sida wax aan horay u arkay. Waad ogtahay goorta aad u baahatid inaad iibiso oo iibsato adigoon cidna ku dhicin falanqeyn. Taasi way adag tahay in la yimaaddo ganacsiga maanta. Ganacsiga guud ahaan ujeedada.
Dad badan ayaa ka faa'iideysanaya software-kaaga. Anigu waxaan ahay ganacsade yaryar oo badan (2-3 qandaraasyo) iyo dhif iyo naadir in aan la kulmo maalin walba 1K bartilmaameedka isticmaalka software-kaaga. Waxay u egtahay muraayado Xray ah oo aad ka rajeyn kartid qamadida u socota. Kaliya "raac xisaabta" sida aad tiraahdo. Ma noqon karto mid run ah.
Nambarradu been ma sheegaan!
Robert - Trader Maalinta Maalgaliyaha.
KA QAADASHADA RISK
natiijada waxqabadka khiyaali ah waxay leeyihiin goldaloolo badan oo soo jireenka ah, Qaar ka mid ah kuwaas oo hoos ku qeexan. matalaad No la sameeyey Taasi account kasta doono ama u badan tahay in la gaaro faa'iidada ama lumiyo la mid ah kuwa lagu muujiyey, Dhab ahaantii, waxaa jira kala duwanaan fiiqan si joogto ah u dhaxaysa natiijada waxqabadka khiyaali ah iyo natiijooyinka dhabta ah Ka dibna waxa lagu gaadhaa iyada oo barnaamijka ganacsiga gaar ah.
Mid ka mid ah Xudduudka natiijada waxqabadka khiyaali ah waa in ay Guud ahaan diyaarshay faa'iido u ah gocasho. Intaa waxaa dheer, ganacsiga khiyaali ah kuma saabsana khatarta dhaqaale, iyo jirin diiwaanka ganacsiga khiyaali ah gebi ahaanba warsan kartaa saamaynta Of halista dhaqaale ee ganacsiga dhabta ah. Tusaale ahaan, awood u leh inay joogsada lumiyo ama in ay u hoggaansamaan barnaamij ganacsi gaar ah in kasta oo ay ganacsi u lumiya yihiin dhibcood qalab kaas oo sidoo kale si xun u saameyn karaa natiijada ganacsiga dhabta ah.
Waxaa jira arrimo badan oo kale oo la xiriira in ay suuqyada ee guud ama in hirgelinta barnaamij ganacsi kasta oo gaar ah oo aan si buuxda loo xisaabay inay kartaa in Diyaarinta natiijooyinka waxqabadka khiyaali ah oo dhan oo Si xun u saamayn kartaa Ganacsi shaacinta natiijada Risk: Futures iyo ganacsi Forex ka kooban yahay la taaban karo halis ah oo aan for Maal kasta. Maal An kara waayi kartaa oo dhan ama ka badan maalgelinta hore. caasimada Risk waa lacag lagu lumin karaa iyada oo aan khatar kuwa ammaanka ama nolosha style dhaqaale. caasimada halis Kaliya waa in loo isticmaalaa ganacsiga oo kaliya kuwa la caasimada halis ku filan waa in ay tixgeliyaan ganacsiga. waxqabadka ee la soo dhaafay khasab ma aha in muujinaysaa natiijada mustaqbalka. Bixinta: maalgashiga securities-ka iyo badeecooyin ku lug leedahay halista ku ool ah iyo waa in aan la sameeyo iyada oo aan waxgarasho oo dhan khataraha la xiriira iibinta iyo iibsiga ee securities.
software The cycletrader, profittrader tilmaamay arrintaasna waxaa loogu talagalay in qalab si ay u caawiyaan maalgashadayaasha in go'aamada maalgelinta. Waxaad leedahay masuuliyadda kaliya ee qiimaynta iyo go'aaminta marka oo ku saabsan waxa la eego in ay galaan wax xawaalad, iyo go'aaminta ku habboonaanta doorashooyinkaaga.
By maalgashiga securities ama badeecooyin, waxaad ku waayi kartaa lacag lacag dhan. waxqabadka ee la soo dhaafay, ma aha ballanqaad natiijooyinka mustaqbalka. nidaamka kasta oo ganacsi ku tilmaamay on this site dhab ahaantii aad ma ka dhigi kartaa wax lacag ah oo aad u baahan tahay si ay u fahmaan khatarta ku lug kor ku xusan.
Waxaa nalooga baahan yahay inaan sheegno arintan - Bandhigaas waxaa loogu talagalay oo kaliya ujeedo waxbarasho iyo fikradaha la muujiyay ayaa ah kuwa kaliya ee soo-bandhigaha. Dhammaan suuqyada la soo bandhigay waa in loo tixgeliyaa khiyaamaynta mana aha in la filayo in lagu soo rogo xisaab ganacsi oo nool.
Tijaabooyinka muuqanaya ee ku yaala shabakadaan waxaa laga yaabaa inaanay wakiil ka ahayn macaamiisha kale ama macaamiisha, mana aha damaanad qaadka waxqabadka ama guulaha mustaqbalka.